Izindaba - osayizi abakhulu ama-Double Eccentric valves we-Civil Water project
usayizi omkhulu wama-valve we-Double Eccentric wephrojekthi ye-Civil Water
Sinikezela ngamavaluva e-butterfly eccentric kabili ku-DN150-2500 eyenzelwe ukuqina kokugxila. Idiski etshekile futhi ivikeleke ngokuqinile, idizayini eyenziwe kahle yesembozo kanye nezindawo zokuphela komshini ezivikelekile zokugqwala zonke izici zihlangabezana nezinga le-API609, BS5155
Ukulahlekelwa ikhanda okuphansi / Ukulungele ukusebenza kwe-throttling service./I-disc eccentric ephindwe kabili inikezela nge-torque ephansi yokushayisana, ukuvulwa okusheshayo okuvulekile, ukusebenza okuhle kakhulu.
Isihlalo esiphindwe kabili se-eccentric sinikeza ukungqubuzana okuphansi, ukumelana nokugqoka kanye nensizakalo yokuphila ende. / Shaft ovundlile ejwayelekile, mpo shaft obandayo njengoba uyazikhethela.
Iringi yokufaka uphawu yokuqina ehlanganiswe ku-disc iyakwazi ukuguquguquka ngokuphelele futhi ingashintshwa / i-Standard SS304 yendandatho yesihlalo somzimba kanye nendandatho yokugcina, ezinye izinto zinjengezinketho.
I-Worm gear opharetha ejwayelekile, ezinye izinhlobo zokusebenza ziyatholakala ngesicelo.
IDeveli levemvane le-Double Eccentric lisetshenziswa kakhulu kumanethiwekhi wokusabalalisa naseziteshini zokupompa. Inikezwa ngomzimba oyindilinga oyisigaxa novemvane noma idiski njengento yokuvala Idiski linikezwa ngophawu olumiswa yindandatho yensimbi engagqwali.
Itholakala nge-eccentricity eyodwa noma kabili ku-disc. Ngenxa yalokhu kuqina, ukungqubuzana phakathi kophawu nesihlalo kunciphile. Amapayipi we-telescopic ngokuzithandela afakiwe ukusiza ukuqaqa i-valve.
Isikhathi Iposi: Feb-23-2021